जब ग्रहकले चिउडोमा मास्क लगाएर बैंक भित्र छिर्दा, सुरक्षाकर्मीले के गरे यस्तो ? ग्राहक अस्पताल, गार्ड जेलमा पुगे – Kavrepati
Home / समाचार / जब ग्रहकले चिउडोमा मास्क लगाएर बैंक भित्र छिर्दा, सुरक्षाकर्मीले के गरे यस्तो ? ग्राहक अस्पताल, गार्ड जेलमा पुगे
जब ग्रहकले चिउडोमा मास्क लगाएर बैंक भित्र छिर्दा, सुरक्षाकर्मीले के गरे यस्तो ? ग्राहक अस्पताल, गार्ड जेलमा पुगे
admin July 3, 2021	समाचार Leaveacomment 131 Views
महामारीले सबै नियमहरु परिवर्तन हुँदैछन् । अझ बैंक जस्ता क्षेत्रमा त पहिले जस्तो नियम लागु हुँदैन । पहिले पहिले मुख छोपेर बैंक वा यस्तै स्थानमा पस्ने जो कोहीलाई लु ट्न आएको आशंकामा ठाउँको ठाउँ रोकिन्थ्यो । तर, अहिलेको महामारीमा बैंकमा छि रे का एक जना ग्राहकलाई भने बैंकका गार्डले मास्क नलगाएको भन्दै गो ली हा ने का छन् ।
भारतको बरेलीस्थित सिभिल लाइन्स स्टेशन रोडको बैंक अफ बडौदामा महामारीको समय मुखमा मास्क नलगाई छि रे को भन्दै गार्डले एक पुरुषमाथि यस्तो गरेका हुन् ।
हालै सार्वजनिक घटनाको भिडियोमा ग्राहक तत्काल भुईंमा ढ ले का देखिन्छन् । र ग ता म्मे उनी अ चे त छन् भने पत्नीले गार्डलाई सोधेकी छिन् ‘तैंले कसरी र किन यसो गरिस्?’ त्यहि क्रममा उनी कसैलाई खबर गर्न फोनमा नम्बर डायल गर्न लागेको समेत देखिन्छ ।
बैंकमा उपस्थित अन्य ग्राहकहरु भने घटनाको तमाशा हेरिरहेका देखिन्छन् । उक्त भिडियो खिचिरहेका एक जना पुरुषले गार्डलाई ‘अब तिमी जेल जान्छौ’ भनेको सुनिन्छ । जवाफमा गार्डले ‘केही छैन यिनी पनि मसँगै जेल जान्छन्’ भनेको सुनिन्छ । प्रहरी घटनाको केही समयपछि घटनास्थल पुगेको बताइन्छ ।
Previous पहिरोले घर पुरिँदा च्या’पिदा श्रीमान श्रीमतीको भयो एकै ठाउँमा चिहान
Next पृथ्वी राजमार्गबाट आयो भर्खरै अत्यन्तै दुख:द खबर